FANOVANA LALÀMPANORENANA : Miantso fifampidinihana indray ny Filoham-pirenena
Maro ireo efa naneho ny heviny. Na ireo antoko politika, ny fikambanana isan-tokony, ny fiarahamonim-pirenena sy ny olon-tsotra dia samy nitsipaka avokoa ny fikasan’ny mpitondra ho amin’ny fikitihana sy fanovàna ny lalàmpanorenana. 25 octobre 2017
Ankilany anefa, mikiry biby ny hanatanteraka izany hatrany ny fitondram-panjakana na dia amin’ny fiteny somary miolaka aza matetika no entin’izy ireo anambarana izany.
Nandritra ny fandaharana Fotoam-bita, izay fotoana ampitan’ny filoham-pirenena hafatra mivantana ho an’ny olom-pirenena nivoaka tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo dia nisongadina tao anatin’izany ny fiantsoany ho amin’ny.
Fifampidinihana miompana indrindra amin’ny ady hevitra misokatra ho an’ny fanitsiana ny lalàm- panorenana izay mahabe resaka ny rehetra amin’izao fotoana izao. Anisany nantsoiny tamin’izany ireo olom-pirenena, ny fiarahamonim-pirenena miaraka amin’ireo mpisehatra rehetra ao anatin’ny tontolon’ny politika.
« Adidiko amin’ny maha filoham-pirenena ahy ny miantso adihevitra malalaka ao anatin’ny fifanajana sy fitsinjovana ny tombotsoa ambonin’ny firenena mba handinihana an’io andininy manahirana ao anatin’ny lalàmpanorenana io », hoy ny nambarany tao anatin’ilay fanambarana.
Araka izany dia ilay andininy faha -47 voarakitra ao anatin’ny lalàmpanorenana no tena tian’ny mpitondra hitondrana adihevitra ao anatin’izany. Ity andininy ity izay mametra ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana. « Ny andininy faha-47 ao anatin’ny lalàmpanorenana no tena isintonako manokana ny sain’ny Malagasy. Araka io andininy io mantsy dia noferana ho 30 andro ka hatramin’ny 60 andro mialoha ny fe-potoana hifaranan’ny fotoam-piasan’ny filohan’ny repoblika amperin’asa no anatan- terahana ny fifidianana. Izany hoe ao anatin’ny 30 andro na efatra herinandro eo izany no tsy maintsy hanaovana ny fifidianana izay misy fihodinana anankiroa », hoy ny fanazavana noentin’ny Filoham-pirenena.
Araka izany dia manahy ny tenany fa ho sarotra ho an’ny firenena ny hanatanteraka fifidianana mangarahara ao anatin’io fe-potoana fohy io. Tsy nilaza mazava anefa ny filoha fa hisy ny fanitsiana an’io andinin-dalàna io saingy taratra ao anatin’ny hafatra nomeny ihany ny tanjona, ary antony iantsoany ireo mpiara-midinika ihany koa. Mametra-panontaniana hatrany ireo mpanara-baovao hoe, raha ny tetiandro eo amin’ny fanatanterahana ny fifidianana no mametraka olana ka maninona tsy ny lalàm-pifidianana no asiam-panintsiana.
Ankilany, ireto farany ihany koa dia manahy ho amin’ny fanatanterahan’ireo mpanao politika hafa izay nilaza fa mety andininy maro no tian’ny mpitondra hokitihina fa tsy io ihany.